Bangiyada Kenya oo la amray inay ilaaliyaan Soomaalida - BBC News Somali
Bangiyada Kenya oo la amray inay ilaaliyaan Soomaalida
Image caption Qaxooti Soomali oo ka soo cararay dagaalada Soomaaliya oo jooga xerada Dhagaxley
Bangiga dhexe ee dalka Kenya ayaa ku amray hay'adaha lacagaha ka shaqeeya sida bangiyadda in kormeer ay ku sameeyaan dhaqdhaqaaqa gannacsiga qaar ka mid ah Soomalida dalka Kenya, kuwaas oo looga shakinayo in ay maal-geliyaan kooxahaislaamiyiinta ee ka dagaalamaya soomalia
Bangiga dhexe waxuu ku amray bangiyadda iyo shirkadaha guryaha deenta ku bixiya in macaamiishooda aanay ka mid noqon shaqsiyaad Soomali ah oo bishii April ee sannadkan lagu xussay qaraar uu soo saaray gollaha ammaanka ee Qaramada midoobay oo dalbaday in hantida dadkan la xayiro.
Shaqsiyaadka ay Qaramada Midoobay xustay waa ay badnayeen, laakiin waxaa ka mid ah hoggaamiyaha ururka xisbul-islaam Hassan Dahir Aweys, iyo Hassan Abdullahi Hirsi oo loo yaqaano Hassan Turki iyo waliba Fuad Mohammed Khaliif.
Gollaha ammanka ee Qaramada Midoobay waxaa uu ku eedeeyey shaqsiyaadkan in si toos ah ay u maal-geliyaan ama hoggaaminayaan dhaq-dhaqaaqa xoogaga ka soo horjeeda Dowlada KG ee Somaaliya.
Inkastoo aanan la cadeyn in shaqsiyaadkan ganacsi iyo hantiba ku leeyihiin Kenya , haddana waxay u muuqataa in bangiga dhexe uu ka walaac-sanyahay in lacago lagu taageerayo kooxaha ka soo horjeeda Dowladda la marsiiyo dalka Kenya.
Maamulka Bangiga dhexe ee Kenya waa uu ka gaabsaday in uu fahfaahin ka bixiyoarintan, mana cadda sababta xilligan loo baahiyey amarkan iyadoo qaraarka Qaramadda Midoobay la shaaciyey ku dhowaad lix bilood ka hor.
Khubaradda dhinaca bangiyadda iyo lacagaha ayaa aaminsan in aanay suurtagal ahayn, in si dhab ah dabagal loogu sameeyo lacagaha iyo maaliyadda shaqsiyaadka Soomalida ah ee ay Qaramada Midoobay Xustay.
Marka laga reebo bangiyadda, ganacsatada Soomalida ayaa waxay si aad ah u isticmalaan habka lacagaha la isugu gudbiyo ee Xawaaladaha oo ay xeeldheerayaashu sheegayaan in ay adagtahay in la kormeero.
Hoggaanka guddiga ganacsada ee xaafdda Easleigh ee Magaalada Nairobi, ayaa aamisan in aanay suurtagal ahayn in lacago Kenya laga diray, lagu maalgeliyo dagaalada Soomaaliya.